Amakhasino we-Casino 2019 - Ukufundwa kwengqondo okuku-inthanethi
Ukufundwa kwengqondo ku-intanethi > Izihloko > Amabhonasi we-Casino 2019
Megan October 27, 2018 IzihlokoUmake ibhonasi, yekhasino, ibhonasi yekhasinoShiya amazwana kuma-Casino Bonuses i-2019
Awekho Amabhonasi I-Deposit 2019
Kuphephile ukusho ukuthi uzimisele ukuqala ukubheja? Awudingi umvuzo weqembu lesigceme sokugembula kuqala. Asikho isizathu esicindezelayo sokucindezeleka, sikhethe okuhle kakhulu kuwe. Iyiphi indlela engcono yokuqalisa ukudlala kwakho kwezemidlalo kunokuba neqembu elithile elingenakulinganiswa esitolo e-UK? Bayokwenza ngcono kakhulu isipiliyoni sakho futhi banikeze okuningi kumnandi. Kufanele siphenye futhi sibone ukuthi yini eyenza ihluke kangaka! Awekho Amabhonasi We-Deposit Casino
Yini engekho amakhodi engeziwe wesitolo?
Ziyindlela yokwelashwa okungavamile okutholayo uma uqala ukurekhoda kwenye iklabhu yokugembula e-inthanethi e-UK. Le mivuzo ingafika ngobujamo obuhlukahlukene nobukhulu, isibonelo, ukuvuza imali, ukuguqulwa kwamahhala, ukuxhumanisa, nokunikezwa kwemali ye-cashback. Zenzelwe ukunikeza iklayenti ukuthi iyakwamukela ukuqala ukubheja.
Ubani ongathola umvuzo wesigungu sokugembula club?
Njengomthetho, lezi zinhlinzeko zamahhala ezamukelekile zihloselwe ukudonsa abadlali abasha baseBrithani. I-Clubhouse nayo ibanika njalo amaklayenti awo amanje. Ngokwesibonelo, uma iklabhu yokugembula ithumela enye into yokuzijabulisa, kufanele idinga ukugubha ngokunikeza izikweletu ezingenamkhawulo mahhala. Ezinye izinkampani zinikeza zona njengesici esiyinhloko esimisweni sabo sokungaqiniseki.
Lokhu kuhlanganisa nesilinganiso esithile semali oyithola uma ujoyina. Iklabhu yokugembula ingakunika izici kusuka ku-5 kuya kuma-50 Amakhilogremu noma ngaphezulu. Kusukela ngaleso sikhathi phambili, ungaqala ukubheja. Kumele ugxile kwimfuneko yokubheja. Ngomgomo wokugcina ukubuyisela inzuzo yakho, kufanele ugijime umklomelo wakho wemali phakathi kwe-30 nezikhathi ze-100. Lokho kungaqhathanisa ukuqala ngomqondisi oyedwa bese uya kokulandelayo.
Lapho uthola imali eningi, ziyanda izidingo zokubheja. Kunoma ikuphi, ungakhathazeki, ngoba naphezu kwakho konke ongabheja ngaphandle kwezingozi zesabelomali. Le mali yomvuzo ikuvumela ukuba ubonge imishini yezikhala eziku-inthanethi nokunye ukuphambukiswa kweklabhu yokugembula.
Lokhu ukuma phakathi kwamalungiselelo angaphandle lapho. Njengoba igama likusho, ukuphazamiseka kwamahhala kuyashintsha okunye ongayisebenzisa ukuze udlale ukuhlukahluka okuthile. I-clubhouse imiklomelo wena owehlukana ngamahhala ahlukene, ngenxa yokuvuleka kwamaqembu okugembula okwedlule noma kulabo abawaziwayo kakhulu. Kumelwe ujoyine nje futhi uhambisane namahhala ahlukahlukene azodluliselwa kumrekhodi wakho. Ngokuphindaphindiwe, ungathola umvuzo wokukhishwa mahhala phakathi kokuzijabulisa kwakho.
Khumbula ukuthi lezi zintengiselwano zamahhala zisho kuphela imishini yokuvula. Ayikho inombolo ethile efinyeleleka kuwo wonke amakilabhu wokugembula. Ungathola amahlumela amahlanu, ayishumi noma ayisishiyagalombili noma isikhathi esiningi kakhulu. Uma uphazamisa ngokwengeziwe, amahlumela amaningi odinga ukuwina. Ngenhlanhla ungagcina imivuzo yakho edalwe ngezindlela ezihamba ngamahhala.
Iqembu elincane linikeza abadlali abasha umvuzo wokudlala wamahhala. Lokhu kusho ukuthi uthola imali yamahhala okuzodlala nayo uma wenza irekhodi. Yiba njalo, imali ekhokhelwayo kumele isetshenziswe ngaphakathi kwesabelo esithile. Ngakho-ke thatha ijubane, ungathanda ukungadluleli ithuba lokuwina omkhulu!
Ngokuvamile kunalokho, isikhathi sabekwa yiqembu lokugembula futhi likwazi ukusuka ku-30 kuze kube ihora. Uma kungenzeka ukuthi umvuzo wakho uphezulu kunokwakhe konke iqembu elikunike lona, ​​ungagcina isamba esithile. Ngamunye wemininingwane mayelana nalezi zinhlinzeko ingatholakala kumigomo nemibandela yabo endaweni.
Uma kungenzeka ukuthi ulahlekelwe, akukho sizathu esicindezelayo sokucindezeleka. Lona umvuzo ovunyelwe yiqembu lokugembula kubadlali abathi, kusukela emuva nangesonto noma ngenyanga, balahlekelwa ukheshi. Ungangena usuku lwakho oluthandwayo kakhulu usuku olulodwa futhi uthole ukuthi uthola i-10% yenani elikhulu lezinsalela kusukela ngesonto elidlule. Yeka ukuthi kumangalisa kangakanani lokhu?
Khumbula ngento ehamba phambili futhi ebaluleke kakhulu mayelana nale mivuzo: azidingi isitolo.
Awekho amakhodi engeziwe wesitolo
Ngokusebenzisa ikhodi yakho yomvuzo ngaphambi kokudlala i-clubhouse yakho ethandwa kakhulu, ungabheja ngaphandle kwezingozi ezihlobene nemali.
Ungasebenzisa kanjani amakhodi engeziwe wesitolo?
Ukwenza amakhodi angeziwe akudideki nganoma iyiphi indlela. Kufanele umane wenze irekhodi bese ushumeka ikhodi yomvuzo lapho iceliwe. Amanye ama-clubhouse aku-inthanethi adinga ukuthi amaklayenti abo axhumane nokuqiniswa kwamakhasimende ngenhloso yokugcina ukuthola lamakhodi. Casino Amabhonasi
Ungakwazi yini ukugcina okuphumelelayo ku-no-club yokugcina e-UK?
Ngempela, kungacabangela ukugcina lokho okuwinayo kusukela emivuzo. Ngaphambi kokuthi ungadonsela noma yimiphi imivuzo, udinga ukwanelisa okunye okudingekayo kokubheja. Isu lokukhokha lingashintsha ngokuqala ngeqembu elilodwa bese ungena olandelayo. Ixhomeke ezintweni ezidingekayo njalo njalo. Ngokwesibonelo, lapho kwenzeka ukuthi udlale ama-200 Pounds futhi udinga ukuwabheja izikhathi ezingu-30, izinqola zakho kufanele zizuze ama-6000 Amakhilogremu. Ngemuva kokuthi unelisekile okudingekayo ngaphambili, ungadonsa imali yakho bese uyayithanda.
Yithuba elihle lokuthi ube nesikhathi esihle futhi uzuze imali. Bheka ukujiya kwamanzi ngaphansi bese uthola i-clubhouse yase-UK enikela ngemivuzo yamahhala ngaphandle kwezitolo. Thola ukuphambukiswa okuthandayo, ukubhalisa, ukuthola imivuzo yamahhala, bese uqala ukubheja. Inzuzo kusuka ezingqinambeni zakho futhi wenze okuhle kosuku lwakho!